Nifindra mpampiantrano izahay ... Mety te hanana izany koa | Martech Zone
Alahady 31 Janoary 2016 Alakamisy, May 19, 2016 Douglas Karr
Tsoriko fa diso fanantenana tanteraka aho izao. Rahoviana managed WordPress hosting namely ny tsena ary namako ny orinasany ny namako sasany, tsy ho faly aho. Amin'ny maha masoivohona ahy, sasatra aho nandany olana taorian'ny olana tamin'ny mpampiantrano tranonkala izay hampita olana amin'i WordPress amintsika. Miaraka amin'ny fampiantranoana Managed WordPress, ny mpampiantrano anay dia nanohana ny WordPress, nanatsara azy io ho an'ny hafainganam-pandeha, ary nanana fiasa manokana amin'ny fitantanana ireo tranokalanay rehetra sy ireo mpanjifanay rehetra.
Nisoratra anarana ho mpiara-miasa haingana izahay ary nanana orinasa an-jatony nisoratra anarana, manome vola miditra ho anay. Nanjavona ny aretin'andoha amin'ny maha masoivohom-pokontany antsika - farany teo izahay dia nanana fanampiana 24/7 ho an'ny mpanjifanay ary fampiantranoana lehibe miaraka amin'ny lakolosy sy siotsiôna rehetra. Niakatra hatramin'ny iray volana lasa izay. Ny mpampiantrano anay dia nampiantrano anay tamina andiana mpizara iray tao amin'ny ivon-toerana iray izay tsy nampino andianà fanafihana DDoS manimba. Ny tranonkalantsika sy ny tranokalan'ny mpanjifanay rehetra dia nidina sy midina isa-minitra na mihoatra, toa tsy nisy fiafarany tao amin'ny tranokala.
Nihazona izahay fa nanomboka sosotra tamin'ny tsy fahampian'ny fifandraisana. Samy namono anay daholo ny mpanjifanay, ary tsy afaka nilaza tamin'izy ireo na inona na inona izahay satria tsy nilaza na inona na inona taminay ny fampiantranoana anay. Afaka niresaka tamin'ny iray amin'ireo tompony aho tao anatin'ny vondrona matihanina WordPress tao amin'ny Facebook ary nilaza izy fa manana tanan-tanana rehetra eny an-tokotanin-tsambo ary miasa mba hampiala ny mpanjifa voakasik'ireo lohamilina kendrena. Whew… nahafinaritra ny nandrenesana azy ary samy nisaotra azy tamin'ny asany aho ary niandry ny fifindra-monina.
Izany hoe, mandra-pifindra.
Vantany vao nifindra monina ny tranokalanay, dia nandady nijanona izy io. Nanana olana tamin'ny fidirana an-tsokosoko aho, ny famoahana, na ny fanaovana zavatra betsaka tamin'ny tranokala. Nitaraina ireo mpitsidika ahy ary nandady avy tao amin'ny antoko fahatelo nampiseho ny tranokala tamina toerana fijanonana tsy lavitra. Google Search Console dia nampiseho olana iray tena mazava:
Nampiakatra an'ity sary ity aho ary nangataka fanampiana mba hijerena ireo mpizara momba ny olana, nampahafantariko azy ireo fa nifindra monina aho. Ary avy eo nanomboka ny lalao manome tsiny.
Tsy mahavita an'ity aho… nampita ahy tamin'ny teknolojia ka hatramin'ny teknolojia izy ireo izay manohy manome elatra azy io amin'ny fiezahana hahita olana amin'ny tranokalako. Tsy manandrana mamantatra raha fotodrafitrasa ataon'izy ireo akory izy ireo. Ka nanao izay hataon'ny geek rehetra aho. Najanoko ny famoahana sy ny famahana ny olana rehetra rehefa nanondro izy ireo… ary tsy niova mihitsy ny zava-bitan'ny tranonkala. Angamba efa novakin'izy ireo akory ny lahatsoratro lafin-javatra misy fiantraikany amin'ny hafainganan'ny tranokalanao.
Ity no nitondran'izy ireo ahy:
A Hadisoana PHP miaraka amina plugin manokana rehefa nanao an API miantso. Nofoanako ilay plugin, tsy misy fiovana amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranokala.
Ny fangatahana manaraka dia ny fanontaniako ahy hoe aiza no hitako fa miadana ilay tranokala. Ary nanondro azy ireo aho Data data mandady Google Webmaster ary nilaza izy ireo fa tsy manampy izany. Tsia duh… manomboka somary sosotra aho.
Nilaza izy ireo avy eo fa tsy manana mari-pankasitrahana SSL ao amin'ny Content Delivery Network. Olana vaovao io, tsy tsapako akory hoe kilemaina tokoa ny CDN (fifindra-monina talohan'ny fifindra-monina). Ka nametraka an SSL certificate ary nampitan'izy ireo izany. Tsy misy fiovana amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala.
Nanoro hevitra ahy izy ireo mba hanambatra JS sy fangatahana CSS. Averina indray fa io ihany no fanahafana talohan'ny fifindra-monina fa hoy aho tsara ary nametraka a JS sy plugin fanatsarana CSS. Tsy misy fiovana amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala.
Nilaza izy ireo fa tokony handeha aho mametaka sary. Saingy, mazava ho azy, tsy nisalasala izy ireo nahita ahy fa efa izaho mamehy sary.
Avy eo nahazo hafatra aho fa nanandrana ny tranokalako tamin'ny mpizara roa izy ireo ary dia izany diso aho. Raha ny tena marina dia, "Amin'ity fampahalalana ity, afaka mahita izahay fa tsy ny mpizara na ny lozan'ny mpizara no mahatonga ny fotoana lava be entin'ny tranokala." Ka mpandainga fotsiny aho izao ary olako… tadidiko ireo andro ireo talohan'ny niarahako niasa tamin'ny orinasa iray izay noheverina ho manam-pahaizana momba ny WordPress.
Nangataka azy ireo aho hilaza amiko izay ho fanandramana manaraka. Nanoro hevitra ny I izy ireo manakarama developer (Tsy mihomehy aho), mety hiasa amin'ny lohahevitra, plugin ary fanatsarana ny tahiry izany. Noho izany, ny manam-pahaizana WordPress amin'ity mpampiantrano ity dia tsy afaka milaza amiko izay tsy mety, fa maniry ahy aho hanakarama loharano na dia mandoa 2 ka hatramin'ny in-3 heny izay takin'ny orinasa tsotra fampiantranoana aza aho.
Niharatsy hatrany ny tranokala, namokatra izao 500 lesoka rehefa manandrana manao zavatra tsotra ao anatin'ny fitantanan'i WordPress aho. Notateriko ireo lesoka 500. Ny zavatra fantatro manaraka dia lasa ny tranokalako, nosoloina lohahevitra tsotra miaraka amin'ireo kilasy plugins rehetra. Manomboka mampiasa CAPS REHETRA sy marika fiantsoana aho amin'ny valinteniko. Tsy fialamboly ny tranokalako fa orinasa… ka tsy nisafidy izany ny fanesorana azy.
Farany, nahazo antso avy amina olona ao anatin'ny orinasa mpampiantrano aho ary miresaka mandritra ny fotoana maharitra momba ny olana izahay. Eto aho no mitsoka… manaiky izy mpanjifa marobe no manana olana amin'ny fahombiazana hatramin'ny nifindran'izy ireo lavitra ny serivera nanafika DDoS. Marina ve? Tsy ho nieritreritra aho.
Miverina amin'ny famahana olana… Nilazana aho fa mety te hanandrana hifindra any a DNS haingana kokoa. Tetezana iray hafa ao amin'ny maizina satria efa nampiantrano tselatra haingana aho mpamatsy DNS tantanina.
Fitaovana feno… niverina tany isika plugins manome tsiny. Ireo plugins mitovy izay niasa talohan'ny nifindra monina. Amin'ity fotoana ity dia vita tsara aho. Nametraka fangatahana sasany tamin'ny sasany aho Professional WordPress ary manondro ahy izy ireo Flywheel.
Mifandray aho Flywheel iza no misoratra anarana a kaonty fitsapana maimaimpoana, afindrao amiko ny tranokala, ary mandeha izy ary mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha. Ary, fahadisoam-panantenana iray hafa, ny fanaovana an'io ampahany amin'ny vidin'ny vola aloako amin'ny tompon-trano taloha io.
Fa maninona aho no nanapa-kevitra ny hifindra monina?
Ny fifindra-monina ny tranokalanay rehetra dia tsy hahafinaritra. Tsy nandray izany fanapahan-kevitra izany aho noho ny olana momba ny fahombiazana, noho ny olan'ny fitokisana no nandraisako azy. Ny orinasako fampiantranoana farany dia namoy ahy satria tsy ampy ny fahamendrehana (ary mbola tsy manana ny fahamendrehana) hiaiky fa manana olana goavana amin'ny fahombiazana izy ireo. Azoko natao ny niaritra ny filazan'izy ireo tamiko ny marina sy ny fiandrasako ny fotoana ahitan'izy ireo ny fanitsiana, saingy tsy zakako ny nanondro ny rantsan-tànany fotsiny.
Ity ny tatitry ny Webmaster andro vitsivitsy taty aoriana:
Mety manontany tena ianao hoe inona no mety hitranga rehefa Flywheel mihalehibe… hiteraka fanandramana mitovy amin'izany ve? Ny iray amin'ireo zavatra hitako tamin'ity fifindra-monina ity dia ny tsy fananana fahaiza-manao virtoaly hananana ny fahombiazan'ny kaonty iray ny mpampiantrano taloha. Vokatr'izany, ny olana dia mety tsy ny fametrahana ahy akory, mety ho olon-kafa manangona loharano ao amin'ny mpizara no mampidina antsika rehetra.
Miaraka amin'ny tranokala soa aman-tsara Flywheel, mametraka ny taratasy fanamarinana izahay ary mamerina ilay bibidia. Miala tsiny aho noho ny tsy fahampian'ny atiny tamin'ity herinandro lasa ity. Afaka miloka ianao fa manonitra fotoana very izahay!
Fambara: mpiara-miasa amin'i Flywheel izahay izao! SY Flywheel efa natolotry ny WordPress!
Tags: flywheelfampiantranoana WordPress voafehyWordPressWordPress hostingwpengine
1 Mey 2016 tamin'ny 7:09 hariva
Mahatsapa aho fa nanana olana toy izany tamin'ny mpampiantrano tranokala ahy ihany koa. Manontany tena ianao raha toa ka tsy mampiasa ny fampiantranoana WordPress tantanin'izy ireo amin'ireo mpizara mitovy amin'ny fanafihana DDoS ve izy ireo? Lalao tsy mitovy tanana sy manome tsiny mandra-pahatongan'ny teknolojia farany izay nilaza fa nahita olana momba ny mpizara anatiny iasan'izy ireo. Aza mino aho fa nanana olana nanomboka tamin'izay.
1 Mey 2016 tamin'ny 8:03 hariva
Heveriko fa avo ny fangatahana amin'ireo sehatra voatantana ireo. Mampalahelo fa araka ny fantatro sy ianao… misy olona maro kokoa any izay "mieritreritra fa fantany" ary tena mahafantatra izay mitranga amin'ireo sehatra ireo. Mino aho fa hahatratra izy ireo ary hampiasa rafitra fanaraha-maso izay hahafahana mamantatra olana. Raha ny marina, ity tranga ity dia toa nitoraka zana-tsipìka tamin'ny rindrina fotsiny. Tsy natoky tena intsony aho.
1 Mey 2016 tamin'ny 8:35 hariva
Tsapako ny fanaintainanao. Tsy misy ratsy kokoa noho ny mandeha mamaky ny torolàlana troubleshoot scripted tsy misy ilana azy rehefa fantatrao fa tsy hanampy.
Ity mpampiantrano hafa ity izay fampiantranoana IonThree? Ary tokony hieritreritra ny hifindra ve isika? Heveriko fa nanavao ihany isika.
Ary koa, antenaiko ny hiantsoanao ny orinasa amin'ny anarany satria manana mpanjifa ianao izay nampiantrano azy ireo ary, toa ahy, mety hanontany tena izy ireo raha manana olana mbola tsy fantany izy ireo. Raha tsy hoe mikasa hafatra manokana amin'ny mpanjifa voakasik'izany ianao.
1 Mey 2016 tamin'ny 9:10 hariva
Hitako ny olana amin'ny alàlan'ny Google Webmasters ary mijery ny statistikanay mandady, Tolga. Tsy mino aho fa an'ny mpanjifany rehetra, mieritreritra fotsiny aho fa niantona tamin'ny mpizara sasany miadana miaraka amina entana be dia be isika. Raha tsy mahita fihenan'ny fampisehoana ianao dia angamba tsy misy antony tokony hiala. Flywheel dia tsy dia lafo loatra amin'ny safidintsika kaonty marobe, tsy azo antoka fa afaka mamonjy vola vitsivitsy ianao.
2 Feb 2016 tamin'ny 10:16 maraina
Mpankafy lehibe an'i Flywheel, Doug. Nampiasa nandritra ny herintaona mahery.
2 Mey 2016 tamin'ny 5:10 hariva
Tsy mino aho hoe nihena firy ilay tranokala, ary tsy afaka nanome valiny mahitsy izy ireo. Faly ny mandre zavatra mandeha tsara miaraka amin'i Flywheel. Vao tsy ela akory izahay dia nanova ny fampiantranoana ny tranokala Roundpeg koa, ary manana tontolo azo antoka kokoa ho an'ny tranonkalantsika.
Mar 23, 2017 amin'ny 1: 30 AM
Tena sahirana amin'ny fanipazana orinasa any ambanin'ny bus amin'ireo lahatsoratra ireo imasom-bahoaka aho. Ny orinasa rehetra dia manana olona tsara ary ny antenaiko dia ny nahatratrarako azy ireo tamin'ny volana ratsy.
Mar 24, 2017 ao amin'ny 2: PM PM
Nieritreritra bebe kokoa momba an'io aho, ary fantatrao inona? Marina ny anao. Esory azafady ny hevitro. Na eo aza ny olana atrehinay / Flywheel, na dia amin'ny androny ratsy indrindra aza dia mbola resin'izy ireo ihany ny host toy ny HostGator, GoDaddy, sns.